ဧ၀ံဂေလိဆိုတာ ဘာလဲ။ | Rev.U Min Lwin
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: ဧ၀ံဂေလိ.	Leaveacomment
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို သူ၏ ကျေးဇူးတော် ကယ်တင်ခြင်းကို သိမြင် ရရှိစေချင်သည်။ လူသားများ၏ လက်တွေ့ အသက်တာ ထဲက အခြေခံ ပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် ကျွန်တော်တို့အတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျဆုံးသူများ၊ ကျွန်တော်တို့သည် ပုန်ကန်သူများ၊ ကျွန်တော်တို့သည် ပြည့်စုံခြင်းတရား၏ အဝေးတွင် ရောက်နေသူများ၊ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်၏ စုံလင် ပြည့်ဝသော လုပ်ဆောင်မှု မပါမရှိဘဲ စုံလင်သော ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မ၀င်နိုင်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ၇ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာကို သတင်းကောင်းဟု ခေါ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် သာမန် အကူအညီမျှသာ ပေးအပ်သူ မဟုတ်ပါ။ သူသည် အလုံးစုံတို့ကို လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သာလျှင် “စစ်မှန်သော သတင်းကောင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို ဧ၀ံဂေလိ ဟု လည်း ကောင်း၊ Gospel ဟုလည်းကောင်း၊ သတင်းကောင်းဟုလည်းကောင်း ခေါ်ပါသည်။
← စစ်မှန်သော ချီးမွမ်းခြင်း
ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ ကိုးစားလိုက်ပါ →